Myanmar-Thabin-Ah-Hla-Sin-Thumyar And Pakokku Flood Victims | News, Art and Ideas For Burma
Filed under: MY NEWS, PHOTOS — Nyo Gyi @ 6:44 am
“မြန်မာ့သဘင် အလှဆင်သူများ” လည်း ပခုက္ကူရေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် အလှူခံထွက်
မန္တလေးမှ ဇာတ်မင်းသားလေးများ ပေါင်းစည်းတည်ထောင်ထားသော “မြန်မာ့သဘင် အလှဆင်သူများ” အဖွဲ့သည်
“ပခုက္ကူရေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ပရိသတ်များနှင့် ကျွန်တော်တို့ သူစိမ်းတွေလိုမနေဘဲ ကူညီကြပါစို့။ ကသောလက်ဖြင့် လှူကြမည်”
I would like to invite you all to come and listen Myanmar Music Online. I havealot Myanmar Songs and Myanmar Mp3 collected on my site. Myanmar Online Music: http://www.myanmaronlinemusic.com/Thanksalot!!
Comment by YL — November 23, 2011 @ 7:33 am